Hogaamiyaha xisbiga Wadajir C / raxmaan C / shakuur Warsame oo la hadlay idaacada VOA ayaa ka jawaabaya go’aanka wasaarada amniga ay ku joojisay in ilaalo lala galo Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho sababo la xiriira in laga fogaado isku dhac dhexmara ilaalada garoonka iyo ilaalada hubeysan ee ku sugan gudaha xiliga lagu jiro Madaarka.
C / raxmaan C / shakuur ayaa dhaliilay go’aankii ka soo baxay Wasaaradda Amniga Soomaaliya ee amarka lagu soo rogay, maadaama Hogaamiyayaasha Dowladda Federaalka loo ogol yahay oo keliya inay garoonka la galaan ilaaladooda inta ay dhoofayaan iyo marka ay imaanayaanba.
Haddii uu amaan jiro Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde maxaa ilaalada looga reebi waayay Madaxda Dowladda sida Madaxweynaha & Ra’iisul Wasaaraha, go’aankaas waa cadaalad darro lagu doonayo in lagu yareeyo safaradeena dhanka Garoonka” Sidaas waxaa yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir C / raxmaan C / shakuur Warsame oo xubin ka ah Midowga Musharaxiinta ayaa tilmaamay in Wasaarada Amniga ay daneyneyso in la caburiyo masuuliyiinta xilka haysa sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaan la tartameynaa musharaxa dowladda, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, haddii isaaga loo oggolaado, oo angana nalaga reebo, waa caddaalad darro, taasna waa mid aan caqli gal ahayn mana ahaa mid la aqbali doonnaa. Ayuu yidhi Cabdiraxmaan.
Ilaalada dowlada Soomaaliya maxaa yeelay hogaamiyaasha dowlada dhamaantood mooyee laga mamnuucay inay galaan Airport-ka aan la cadeynin waxaa loogu talagalay in laga fogaado isku dhaca u dhexeeya ilaalada iyo askarta goobta ku sugan, maadaama cidina aysan aqoon sida loo khudbeeyo.
Wasiirka amniga ee xukuumada Soomaaliya oo lahadlayay idaacada VOA ayaa sheegay in go’aankaasi uusan aheyn mid lagu caburinaayo musharixiinta u taagan xilka madaxtinimada dalka oo qaarkood xilal kala duwan dalka ka soo qabteen isla markaana ay degan yihiin dhismayaal aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Madaarka Muqdisho.